Mmemme egwuregwu Mentor – International Writing Centers Association
Mmemme Match IWCA Mentor na-enye ohere nkuzi maka ndị ọkachamara n'etiti ide ihe. Usoro ihe omume ahụ na-edobe egwuregwu ndị ndụmọdụ na ndị nkuzi, mgbe ahụ, ụzọ abụọ ahụ na-ekwurịta ihe mgbaru ọsọ ha maka isonye na mmemme ahụ, kpebie ụzọ kachasị mma isi mezuo ebumnuche ndị ahụ, ma kọwaa paramita nke mmekọrịta ha, gụnyere ụzọ nkwurịta okwu kachasị mma na ugboro ole nke akwụkwọ ozi. N'ihi na mmemme ahụ na-ewe ụzọ na-adịghị agwụ agwụ, a na-agba ndị ndụmọdụ na ndị ndụmọdụ ume ka ha kesaa ozi ma mụta ihe site na ibe ha, ya mere, akụkụ abụọ ahụ na-erite uru na mmekọrịta nduzi.
Ntozu na usoro iheomume
Ndị ndụmọdụ na ndị mentees nwere ike inye ibe ha nkwado dị iche iche. Ha nwere ike:
Tụgharịa aka n'otu n'otu na akụrụngwa.
Jikọọ onwe gị na ndị ọrụ ibe na mba ụwa, na mba, na mpaghara ha.
Gaa na mmepe ọkachamara, nyocha nkwekọrịta, na nkwalite.
Nye nzaghachi na ntule na scholarships.
Na-eje ozi dị ka onye na-enyocha ihe n'èzí maka nyocha ederede.
Na-eje ozi dị ka akwụkwọ maka nkwalite.
Na-eje ozi dị ka oche na ogwe ogbako.
Zaa ajụjụ ndị na-achọsi ike.
Nye echiche ndị ọzọ gbasara ọnọdụ.
Ndị otu IWCA niile tozuru oke isonye na mmemme egwuregwu IWCA Mentor Match. Mmemme ahụ na-agba ọsọ na okirikiri afọ abụọ, na okirikiri Mentor Match na-esote ga-amalite n'October nke 2023. Ndị na-ahazi IWCA Mentor Match Co-Coordinators ga-ezigara ndị otu IWCA niile nyocha n'August nke 2023 na-akpọ ha ka ha sonye na mmemme ahụ. Nnyocha ahụ jụrụ ọtụtụ ajụjụ gbasara ebumnuche onye otu IWCA maka isonye na mmemme na ụlọ ọrụ ha. Ndị nhazi na-enyocha ozi a nke ọma iji kwekọọ na ndị ndụmọdụ na ndị ndụmọdụ nwere ebumnuche na/ma ọ bụ ụlọ ọrụ yiri ya. Ọ bụrụ na ndị na-ahụ maka nhazi enweghị ike ijikọ onye ndụmọdụ ma ọ bụ onye nlekọta, ha ga-eme ike ha niile ịchọta onye ndụmọdụ / mentee nke dị mma, mepụta otu onye ndụmọdụ maka ndị sonyere na-enweghị atụ, na / ma ọ bụ jikọọ ha na ntinye ederede ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị isonye na mmekọrịta onye ndụmọdụ na-abụghị nke usoro afọ abụọ anyị, biko kpọtụrụ ndị na-ahụ maka nhazi (lee ozi kọntaktị n'okpuru) iji mụta ohere ndị dị.
“Beingbụ onye ndu na mmemme IWCA Mentor Match nyeere m aka ịtụgharị uche na ahụmịhe nke onwe m, dugara na mmekọrịta ọkachamara na onye ọrụ ibe m nwere ọnụ ahịa, ma gbaa m ume ịtụle otu ọkachamara ọkachamara si eduga na ntaramahụhụ.
Maureen McBride, Mahadum Nevada-Reno, Mentor 2018-19
“Maka m, ohere iduzi onye ọzọ nwere abamuru ole na ole. Enwere m ike ịkwado ụfọdụ n'ime ọmarịcha nkwado m nwetara n'oge na-adịghị anya. Mmekọrịta m na mentee na-akwalite otu mmụta mmụta ebe anyị abụọ na-eche nkwado maka ọrụ anyị na-arụ. Ijide ohere a dị ezigbo mkpa nye anyị ndị nwere ike ịnwe mmetụta dịpụrụ adịpụ n'ụlọ ọrụ ụlọ anyị ma ọ bụ na ngalaba ndị ọzọ. "
Jennifer Daniel, Mahadum nke Queens nke Charlotte, Mentor 2018-19
Mmemme IWCA Mentor Match na-enye usoro mmemme kwa afọ maka ndị nkuzi na ndị nkuzi. Biko gaa na Usoro mmemme egwuregwu IWCA Mentor ịhụ ndepụta ihe omume dị ugbu a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara mmemme egwuregwu IWCA Mentor Match, biko kpọtụrụ IWCA Mentor Match Co-Coordinators Maureen McBride na mmcbride @ unr.edu na Molly Rentscher na molly.rentscher @ elmhurst.edu.